URuinerwold Drenthe kunye nosapho lwakhe, oku kusebenza ngokulandelayo kwengqondo (PsyOp) ukuya kwisimo samapolisa ngaphezulu: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	16 Oktobha 2019	• 7 Comments
Lelinye ibali elinjalo elinokuthi laqengqeleka ngqo kwi-movie script tube kaPeter R. de Vries. Kodwa oko kunye nemilenze yakhe kwindiza eqine kakhulu yeTransavia, ngoko ke ayinakuba nanto yakwenza nayo. I-studio zikaJohn de Mol kunye noTalpa nazo azinalo ulawulo, kuba uJohn kuphela ngumzalwana onovelwano walowo uLinda onwabile, owayengumntu omnandi kakhulu uWilleke Alberti noyise kaJohnny onemvukelo. Inyaniso yokuba inephethe i-ANP ayinanto yakwenza nemveliso yeendaba ezingeyonyani. Hayi, eli bali "liyinyani ngokwenene"! Ubuncinci, kuya kufuneka uyikholelwe loo nto. Kufuneka uyikholelwe loo nto!
een bartender enzima (ngokuthe ngqo kuqeqesho lweshishini lemidlalo yeqonga?) ngubani ofumane unyana oshiyekileyo odidekile we-25 utata ongenguye utata kwaye usapho lufihle usapho iminyaka eyi-9 xa u-Anne Frank efihle ngasemva kwifama eseRuinerwold. Ewe ewe, kwaye eli tyala lifana kakhulu nelinye kwityala elivela e-Austria kwiminyaka embalwa eyadlulayo. Inye Ityala elitsha likaFritzl yahambisa iphephandaba I-Austrian. Tada! Umsebenzi olandelayo wengqondo (PsyOp)! Bayenza njani loo nto! Kodwa qiniseka; apha le Goebbels 'enkulu iya kuphinda yenze umsebenzi wayo kwakhona: Ukuba uyiphindaphinda kaninzi ngokwaneleyo, wonke umntu uya kuyikholelwa.
Asikholwa konke konke! Ibali elipholileyo. Kwaye ukuyinika ukuthembeka kokunyusa (kuba iphephandaba eliphuma kwi-Netherlands lifundeka kwiingcaciso apha kwaye sele lifumanisa ukuba andiyikholelwa), kunikwe ingxelo namhlanje ukuba abanye abantwana ababhaliswanga kunye noluntu isikhundla.
"Unakekelo lokuqala kunye nokunikwa ingqalelo kuphuma kwabo bakhoyo ekhaya. Intsapho ikwindawo ekhuselekileyo. Kufuneka baphumle. ”Usodolophu uncoma umnini wecafe endaweni yakhe. Waye wafumana umntu omncinci kwindawo yakhe yokubhabha, edidekile ngokupheleleyo kwaye endle. "Ukuba umntu ucela uncedo, kubalulekile ukuba unikwe. Umnini-cafe ufanele ukudunyiswa ngokubiza amapolisa. "
"Inani labantwana alibhaliswanga kwirejista yoluntu. Lininzi, "utshilo usodolophu ekupheleni kwengqungquthela yabezindaba. Kutheni le nto abantwana ababhalisiweyo kubonakala ukuba babengekho kwi-radar yamagosa ezemfundo anyanzelekileyo, wayengatsho. Zonke ezo zinto kufuneka zilungisiwe.
Well, ke uyazi! Yi-PsyOp kwaye usapho alukho. Isiseko somyalezo: rhoqo amapolisa ”, kuba sililizwe lesizwe samapolisa, ngoko kuya kufuneka uye emapoliseni ngayo yonke into. Ngokuqinisekileyo siza kubona iifoto kunye nemifanekiso yevidiyo! UJohn de Mol unokukuvelisela yonke le nto (jonga apha ukuba injani) iimveliso ezinzulu ukusebenza) noPeter R. usekhefini yakhe efanelekileyo emva kokuba evunyelwe ukwenza oku. Kuya kufuneka iphoselwe umva ngokukhawuleza (imilenze yakhe ibambekile phakathi kwezihlalo zomoya obaleke kakhulu eTransavia) ukunika umbono wakhe ophambili. Ngokuqinisekileyo sinomdla onomdla wokubona 'amalungu ePrimiyamu' athe abakwaTelgraaf abaloba ngeli xesha kwi-PsyOp elandelayo.
Kwi-PsyOp elungileyo uhlala unezinto ozenzele zona Ingxaki iyafuneka kwimithetho 'Ingxaki, Ukusabela, Isisombululo '. Ngokongeza uzama uzama ukuqhubela umthetho ongasokuze wamkelwe ngabantu. Ke wena udala ingxaki yegalelo elikhulu ngokusebenzisa iindaba ezingezizo, emva koko, kwimithombo yeendaba kunye nabaphathi ngenkalipho abahlawuleyo abanjengoJeroben Pauw noMatijs van Nieuwkerk, ukucaphukisa umsindo phakathi kwabantu: Ukuphendula. Ukwenza oku ngokuqesha iingcali ezininzi, amangqina obuxoki kunye nabezopolitiko (abadlali abaziingcali). Oosodolophu nezopolitiko bayaphulukana nenkcazo njengamalungu afungelweyo kuluntu owaziwayo. Akukho ngxaki, ke, ukuphucula oko kusabela ngokweemvakalelo. Ke ixesha selifikile lokuba umthetho wamapolisa omtsha kwaye abantu bayakuwamkela ngaphandle kokuzabalaza, kuba "Soze kuphinde!" UJohn de Mol enye i-dollar ezigidi ngokudibeneyo; UPeter R. ukusukela ngoku udidi lweshishini kunye noJeroben noMatthijs basafumana iitoni ezimbalwa ngaphezulu kwesiqhelo seBalkenende.
Yintoni mhlawumbi ngelo xesha? isisombululo? Kuthekani ngomthetho owenza ukuba kwenzeke ukuba utyelele abasebenzi bakarhulumente kube kanye ngexesha ojonga ukuba ngubani ohlala kwikhaya elithile. Ilungile ingqesho kwangaxeshanye, kuba ke sidinga omnye umkhosi wabaphandi abangaqhelekanga (ii-BOAs) kunye nabantu abasebenzela urhulumente, bambalwa abantu abakhalaza ngokwakha urhulumente onjalo. Kwimeko yamapolisa ufuna ukukwazi ukuhlasela amakhaya ngaphandle kwesithintelo.
Sinethemba lokuba uJohn kungekudala uza kukwazi ukusebenzisa umnatha wakhe ongasekunene uRobert Jensen ukubamba abafundi bakaMartin Vrijland kwakhona, kuba iVrijland ityhila kancinci kakhulu kwaye ke kufuneka sitsalele abo bafundi sibafundise kwimvukelo efanelekileyo yabavukeli. . Funda nantsi indlela odlale ngayo loo mdlalo iba.
Funda apha nqaku elilandelayo
Uludwe lwekhonkco lovimba: telegraaf.nl, telegraaf.nl, telegraaf.nl
tags: ANP, de, deepfakes, eziziimbalasane, ubuxoki obenziwe ngamasibomu, John, Imol, iindaba ezibuxoki, sebenza, peter, inkinga, yengqondo, psyop, R., asabela, URuinerwold, isisombululo, Talpa, bamba
16 Oktobha 2019 kwi-06: 53
Kodwa unyana wayekho kwimidiya yoluntu ... kakuhle ... kakhulu
Inkwenkwe eneminyaka eyi-25-yona, ngokobantakwabo noodadewabo, itshixiwe iminyaka evalelwe kwifama ngaphandle kweRuinerwold - yathumela iifoto kwiintsuku nje ezidlulileyo xa wayejikeleza ilali. Ebumnyameni, umzekelo, wathabatha umfanekiso wegama lendawo kaRuinerwold, ibandla elihlaziyiweyo elalini, kwaye kwavela isithombe sakhe kule ndawo abonwe kuyo.
16 Oktobha 2019 kwi-07: 20
Wayezosebenzela inkampani yeCreconat. Le nkampani yeyabasebenzi boqoqosho loqoqosho lwase Native, inkampani eyakha amaplanga eMeppel apho amapolisa ahlasela ngoMvulo ngokwommelwane. Le nkampani ikwigama lika-B.
Kwindawo yokugcina izinto eRuinerwold, eli tyendyana lafika lacela uncedo, emva koko umnikazi walumkisa amapolisa. UJan uthe akanayo i-ID kwaye akazange akhe aye esikolweni. "Ujongeke kancinci kodwa emva koko samnika ibhiya," UJeffrey walapha uxelele eli phephandaba ngaphambili.
Kodwa kuthekani ngawo onke amaxwebhu asemthethweni asemthethweni ngaphandle kwencwadi yesazisi Injani imeko kumagunya erhafu kwaye njalo ... ayenzeki ngaphandle kwe-ID?
AllesGaatKapot wabhala wathi:
16 Oktobha 2019 kwi-07: 28
Nje ukuba ufumana udliwanondlebe ngokweemvakalelo ezivela kubahlali bendawo iyure emva kwengxelo yokuqala, uyazi ukuba kukho into engalunganga. Ukuba ezi yayizindaba 'zokwenyani', kwakungekho Lwazi lwalukhutshiwe njengenxalenye yophando. Kodwa ngoku, iiyure ze-24 emva kwexesha, sele silazi lonke ibali lobomi bendoda.
Ngethamsanqa baninzi kwaye abantu abangaphezulu kwam abakubonayo oku.
Ukuba ezi zenzo ze-psyops zihlala ziwela ngebhasikithi, ke ndiyathemba ukuba abo banembopheleleko bathuthunjiswa ekufeni. Oko kufuneka kube kuninzi.
16 Oktobha 2019 kwi-09: 08
Kwakuza kwenzeka ntoni kule fama? (sisivakalisi esiphindaphindiweyo / umbuzo)
Kuza kwenzeka ntoni kuMathijsje Nieuwkerk kwikhareji yakhe?
okanye kwindlu kasodolophu eAmsterdam? yintoni yonke eyenzekayo?
Olo vavanyo luye lwamkelwa ngumntu wonke, inyani iTV, ulandelelana "noBhuti omkhulu"
16 Oktobha 2019 kwi-09: 51
Into emnandi ngeli bali kukuba okwangoku akukenzeki nto. Akukho ukubulala okwenziweyo okanye nantoni na enje.
Okwangoku ixesha libonisa ukuba kuphela kokuyeka imfundo esisinyanzelo.
16 Oktobha 2019 kwi-14: 15
thatha ukuba ibhili ibhaliwe kwaye abantu balinde ixesha elifanelekileyo ukuba laziswe. 'Abameli babantu' e-Hague ngokuqinisekileyo baya konwaba ukuvumelana nale nto
16 Oktobha 2019 kwi-19: 55
"Okwangoku asazi", "Sisaqhuba uphando", "Sineqela lonke", "mhlawumbi ibingeyonto, kodwa okwangoku asazi nokuba ... ... kodwa uza kuba lilungu lePrimgraaf ufumana ngakumbi ku "asazi okwangoku" ..
Well .. siyenza ibe PsyOp entle ..
« Ukuvukela okuphelileyo kunye nokubiza iirhafu eziphezulu kunye nolawulo olupheleleyo kuzo zonke iinkcukacha zobomi bakho
Uqhanqalazo lwamaFama: Amafama anikela ingqalelo ukuba iinkokheli zakho zoqhanqalazo azingobameli bakaRhulumente »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.054.365